Guddoomiyaha Gobolka Shabeelaha Hoose oo Wanla weyn kula kulmay odoyaal iyo saraakiil ciidan | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Guddoomiyaha Gobolka Shabeelaha Hoose oo Wanla weyn kula kulmay odoyaal iyo saraakiil...
Guddoomiyaha Gobolka Shabeelaha Hoose oo Wanla weyn kula kulmay odoyaal iyo saraakiil ciidan
Guddoomiyaha Gobolka Shabeelaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray degmada Wanla weyn ee gobolka, halkaasi oo uu kulamo kula qaatay odoyaasha dhaqanka iyo qeybaha bulshada kale ee halkaasi ku nool.
Kulanka waxaa goob joog ka ahaa Guddoomiye ku-xigenka Gobolka, Guddoomiyaha Ururka Haweenka ee gobolka kan maamulka degmada iyo qaar ka mid ah saraakiisha amniga, waxaana kulanka looga hadlay sidii bulshada degmada ay uga qeyb qaadan lahaayeen xoojinta amniga iyo xalinta iska hor imaad dhexmaray ciidanka dowladda ee ku sugan Degmada.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeelaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa tilmaamay inay ku guuleysteen xalinta ciidamadii dhawaan iska hor imaadka ku dhexmaray degmada, waxaana uu intaa ku daray in qeybihii kulanka ka qeyb galay ay isku afgarteen in markale aysan soo laaban falalka nuucaani oo kale ah.
Guddoomiyaha Gobolka ayaa xusay in sidoo kale ay xaliyeen cabashooyin ay qabeen qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka xamuulka qaada oo uu sheegay in xilliyada Roobka ay la kulmaan caqabado badan.
Maxamed Cali Cumar Jubba
Previous articleMaamulka Hobyo oo soo furtay doon afduub loo heystay
Next articleMadaxwaynaha Soomaaliya oo la kumay Dhaxalsugaha Abu-Dhabi